Ogaden News Agency (ONA) – Shir guul ku soo dhamaaday ayaa Xarunta Dhexee JWXO ka socday
Shir guul ku soo dhamaaday ayaa Xarunta Dhexee JWXO ka socday
Faahfaahin dheeraad ah – Waxaa si habsami ah loo soo gabagabeeyay shir howleed lagu qabtay X/Dhexe ee JWXO. Shirkaas oo ay ka soo qaybgaleen dhammaan, Xubnaha GF, GDH, Taliska CWXO, Taliska Qaybaha iyo madaxada Gobalada dalka.
Shirka oo socday muddo afar maalmood ah (1dii-4tii bishan Marso) ayaa waxaa lagu falanqeeyay arima farabadan oo quseeya halganka ka socda Ogadenya xag ciidan, bulsho iyo siyaasadeedba. Waxaa shirka la horkeenay warbixino meela kala duwan oo dalka ah laga soo ururiyay, heerka uu gaadhay halganka shacabka S.Ogadenya ee JWXO ay hogaaminayso gude iyo dibadba iyo qorshihii horey loo dajiyay siyaabihii loo fuliyay. Arimahaasoo idil markii si mug leh loo lafa guray ayaa shirka lagu soo gunaanaday qorshe hawleedka CWXO isagoo guul ku dhamaaday.
Shirka ayaa ugu baaqay jaaliyadaha S.Ogadenya inay ku kalsoonaadaan CWXO oo hadh iyo habeenba u taagan difaaca dalka iyo sharafta umadda. Inaysan ku kadsoomin dacaayadda cadawga iyo brobagaanda-diisa naflacaariga ah ee ku wajahan jaaliyadaha ee gumaysiga uu doonayo inuu ku abuuro guulo aan jirin ka dib markuu ka caagay inuu guul ka keeno goobaha dagaalka.
Dhanka kale Waxaa uu cadawgu ku soo qaaday shirka xarunta dhexe duulaan balaadhan oo nafla caari ahaa, kaasoo ay ka soo duleena saldhigyo badan oo cadawgu ku leeyahay gobolada Qoraxay, Shabeele,Jarar iyo Nogob. waxaa goobo ku kala dhulweyn oo baahsan ka dhacay dagaalo culus oo cadawga la la galay 18 dagaal laga soo bilaabo l -4 bishan. Waxaa cadawga ka soo gaadhay dagaaladaa khasare culus oo isugu jira Ciidan iyo Qalab ba. Waxaa laga dilay inta u dhaxaysa 50-70 askari halka dhaawucu kor u dhaafay 100 askari. Waxaa ku dhacay cadawga in laga qabsado saadkiisii iyo biyihii halakaasna waxaa ku soo gaadhay oon aad ah iyo baahi ka laysay askar badan. waxaa ka lumay askar badan oo hawdka ku dhimaaday, iyadoo ilaa eegga qaar la la’yahay. Goobaha ay bakhtiga badan ku aaseen waxaa ka mid ah, Magaalada Birqod , Gerigoán iyo goobo badan oo miyiga ah.
Go,anada shiraka aya saxaafada dib laga soo siin doonaa mardhow.